Lalao iPhone | Ny lalao tsara indrindra ho an'ny iPhone 6, 5s, 5c, 5, 4s ary 4 | IPhone News (Pejy 3)
Asphalt 9: Legends, azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny
Ny saga Asphalt dia nanjary iray amin'ireo malaza indrindra hitantsika ankehitriny ho an'ny finday. Na dia marina aza fa tsy Asphalt 9: Legends, ilay saga hazakaza-piara malaza an'i Gameloft, dia azo alaina maimaim-poana izao.
Ny fomba ady dia misy amin'ny fanavaozana farany ny PUBG Mobile
Na dia miresaka momba ny Fortnite aza ny rehetra, isika izay manana taona vitsivitsy, ny fananganana rehefa manomboka mitifitra izy ireo mba hiarovana antsika, toy ny tsy The War War Mode, azo alaina amin'ny alàlan'ny fanavaozana PUBG Mobile farany
Monument Valley 2, fizarana nandrasana efa ela izay namela be ny faniriana
Ny fizarana faharoa an'ny Monument Valley 2 dia mihatra amin'ny App Store. Mitohy raiki-pitia fa tsy maharesy lahatra ny mpampiasa toy ny fizarana voalohany.
Nanjavona ny 12 Jolay ny Fortnite's Playground, fa hiverina indray
Amin'ny 12 Jolay, hanjavona indray ny maody Playground, avy ao Fortnite, fa hiverina miaraka amin'ny safidy maro sy fiasa vaovao tsy ho ela izy io.
Ny Playground any Fortnite dia azo alaina indray
Ny maody Fortnite vaovao, Playground, dia azo alaina indray rehefa nanjavona fatratra hatramin'ny nanombohany
Fortnite dia manampy maody vaovao hanome anao fampiharana iray ora nefa tsy ho faty
Ankehitriny Fortnite ho an'ny iOS dia nanampy fomba fanazaran-tena izay hahafahanao mianatra milalao nefa tsy maty maty.
Tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny iPad sy iPhone i Pokémon Quest
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Pokémon Quest ho an'ny iPhone sy iPad, fotoana hihazazana azy rehetra indray.
Fallout Shelter developer nitory an'i Warner Bros, mpamorona lalao Westworld
Ilay mpikirakira Fallout Shelter Bethesda dia nitory an'i Warner Bross ho an'ny lalao Westworld, nilaza fa kopia Fallout Shelter iray miharihary
Pokémon GO dia hamela ny famindrana zavaboary eo amin'ny mpilalao
Niantic dia nanamafy fa hamela ny fifanakalozana pokémon eo amin'ny mpilalao amin'ny lalao Pokémon GO izy amin'ny alàlan'ny fanavaozana iray izay navotsotra.
Navaozina ny PUBG tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny fomba fijerin'ny olona voalohany ho fanampin'ny fiasa vaovao maro
Pubg Mobile version 6.0 dia manome antsika fiasa vaovao marobe, izay ahafahantsika manasongadina ny maody ho an'ny olona voalohany, ny maody arcade ao Miramar ...
Ark: Survival Evolve dia tonga ao amin'ny iOS App Store maimaimpoana hilalao
Tonga ny fandefasana andrasana ao amin'ny App Store, Ark: Survival Evolve dia aseho amin'ny fomba "maimaim-poana".
Ny ARKit 2 dia hamela antsika hilalao amin'ny namantsika amin'ny alàlan'ny Augmented Reality
Apple dia mampahafantatra ny fahafahan'ny mpamorona manampy multiplayer amin'ny lalao Augmented Reality ao amin'ny iOS 12 sy ARKit 2.
Pokémon Quest, no lalao Nintendo vaovao entanin'ny tontolo Pokémon
Mandritra ny volana Jona dia handefa ny lalao Pokémon Quest ho an'ny iOS i Nintendo, lalao vaovao handehanan'ny Pokémon any amin'ny nosy iray izay tsy maintsy hamoronany toby iray rehefa miady amin'ny hafa karazana aminy.
Bibikely manelingelina telo izay namboarin'ny iOS 11.4
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 11.4 sy ny vaovao lehibe natolony anay, dia hitantsika ihany koa ny fomba nanamboarana ny sasany amin'ireo hadisoana tsy mitombina indrindra niseho tamin'ny iOS.
Fortnite dia havaozina amin'ny resadresaka am-peo ary fanatsarana bebe kokoa amin'ny kinova 4.3
Taorian'ny andro manjombona izay nanenjehan'ny PUBG Corp. ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona, ankehitriny ...
Fiainana Toca: Milamina, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao farany natolotr'i Toca Boca hisintona maimaimpoana dia ny Toca Life: Stable, izay tokony hikarakarantsika tranon'omby
Pokémon GO dia navaozina tamin'ny fanesorana ny fanohanana ireo fitaovana amin'ny iOS 8
Ny fanavaozana farany ny fampiharana Pokémon GO, dia manome antsika mifanentana amin'ny iPhone X ary tsy misy mpanohana ireo fitaovana amin'ny iOS 8
GRID Autosport, tonga amin'ny fomba ofisialy ho an'ny iOS
Ora vitsy lasa izay, tonga tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny fivarotana iOS ny lalao GRID Autosport, lalao hazakaza-piarakodia ...
Ankafizo billiard miaraka amin'ny Pool Break, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao Pool Break - 3D Billiards and Snooker dia mamela antsika hankafy billiard amin'ny fomba tena misy sy mandritra ny fotoana voafetra malalaka
Ny lalao Poly Bridge dia amidy mandritra ny fotoana voafetra
Manohy ny tolotra amin'ny fotoana voafetra amin'ny lalao maromaro izahay ary sendra ilay iray navoaka vao tsy ela akory ...
Fiampitana biby: Pocket Cam, aleo aloha mankany amin'ny iPhone-nao
Ny Animal Crossing ao amin'ny kinova findainy dia tonga tao amin'ny iOS App Store hanafika mpampiasa mety ho avotra miaraka aminy avatar kely.
Teny miaraka amin'ny namana 2, ny tohin'ny kilalao Zynga
Zynga dia nahatratra ary namoaka ny tohin'ny iray amin'ireo lalao nahomby indrindra nataony, Words with Friends 2, izay miaraka amina endrika vaovao marobe.
Fiampitana biby: Pocket Camp dia ho tonga ao amin'ny App Store amin'ny 22 Novambra
Lalao vaovao Nintendo ho an'ny sehatra finday, Animal Crossing: Pocket Camp dia hamely ny App Store amin'ny 22 Novambra.
South Park: Mpandrava finday, azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny, fantatrao ve?
South Park: Ny mpandrava finday izao dia misy ao amin'ny App Store hanohy hankafy ny tantaran'i Kyle, Cartman, Stan, Kenny ary maro hafa
Ny lalao Play Hair Salon, izay hametrahan'ny ankizy ny tenany amin'ny kiraron'ny taovolo iray, dia azo sintonina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Lalao Toca Doctor ho an'ny ankizy, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Anio dia asehonay aminao ny fomba ahafahantsika misintona ny lalao Toca Doctor ho an'ny ankizy maimaimpoana ary hitahiry ny 3,99 euro vidiny
Super Mario Run nohavaozina ary mandray ny iPhone X
Nintendo dia haingana nanavao ny lalao ho an'ny Super Mario Run mba handraisana ireo endri-javatra vaovao amin'ny Apple iPhone X.
Ny lalao Hill Climb 2 dia novaina ho an'ny Halloween mankany amin'ny version 1.9.0
Andro inona no tsara kokoa noho ny androany mankafy ny lalao azontsika ao amin'ny App Store ho an'ny ...
Animal Crossing Pocket Camp, azo alaina ao amin'ny iOS amin'ny faran'ny volana Novambra
Vao avy nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny famotsorana ny lalao Animal Crossing: Pocket Camp, ho an'ireo mpampiasa iOS i Nintendo. Ao…
Nintendo hanambara Animal Crossing ho an'ny finday rahampitso
Ny fanombohana andrana ny Animal Crossing ho an'ny finday, haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 25 Oktobra.
Aza mihazakazaka amin'ny sabatra plasma
"Aza mihazakazaka amin'ny sabatra Plasma" na "Aza mihazakazaka miaraka amin'ny sabatra Plasma" dia lalao mampiala voly ho an'ny iOS izay manambatra ny vazivazy, hetsika ary fialamboly Retro
Ny tantara foronina sy ny lasa dia miaraka ao amin'ny lalao Talos Principle, lalao ho an'ny iOS
The Talos Principle, lalao mahaliana miaraka amin'ny sary mahaliana izay afaka mitazona anao hikatona amin'ny efijery iPhone mandritra ny ora maro.
Sago Mini Monster, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana maimaim-poana izay asehonay anao anio dia ny Sago Mini Monster, lalao tsara ho an'ny ankizy kely hilalaovana biby goavambe mampihomehy.
Fifaninanana sary RA nokarakarain'i Niantic niaraka tamin'i Pokémon GO
Niantic dia mandefa fifaninanana sary izay ahafahan'ny tsirairay mandray anjara sy mandresy amina andiana fanomezana mifandraika ...
Tsy ampoizina i Netflix amin'ny fandefasana ny lalao ofisialy Stranger Things ho an'ny iOS
Raha tsy misy manantena azy io, Netflix mandefa ny Stranger Things The Game ao amin'ny App Store, RPG amin'ny fomba XNUMX-an momba ilay andian-tantara malaza.
Super Mario Run dia havaozina amin'ny ambaratonga vaovao sy ny fihenan'ny vidiny
Nintendo dia manavao ny lalao Super Mario Run ho an'ny iOS izay mampiditra ambaratonga vaovao ankoatry ny fampidinana ny vidin'ny lalao feno amin'ny 50%
Ilay lalao video voninkazo malaza dia mamely ny App Store
thatgamecompany dia mitondra antsika amin'ny ekosistema iOS ilay voninkazo mahazatra, iray amin'ireo lalao tsara indrindra nanjary tranombakoka tao amin'ny Smithsonian Art Museum
Toca Life: ny birao no lalao vaovao ho an'ny ankizy kely avy amin'ny Toca Boca
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Toca Boca dia nanangana fampiharana vaovao ao anatin'ny sokajy Toca Life antsoina hoe Office.
Pokémon GO koa dia hanana fanohanana amin'ny ARKit an'ny Apple
Ireo tovolahy tao Niantic dia manamafy fa ny ARKit an'i Apple dia ho tonga any Pokémon GO mba hananantsika traikefa tena marina nampitomboina.
INKS pinball no lalao maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny fampiharana nofidian'i Apple hisintona maimaimpoana mandritra ny herinandro dia ny lalao INKS pinball
Toca Farm, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio dia antsoina hoe Toca Life: Farm, lalao tantsaha sy tantsaha izay hitantanana ny biby sy ny voly ny ankizy.
Niantic dia nanambara daty vaovao ho an'ny Pokémon Go Festival any Eropa
Niantic nanemotra ny hetsika Pokémon Go Safari eoropeana manandrana mitady fotoana mety indrindra hanatrehan'ireo mpanazatra Pokémon azy rehetra.
Lalao 3 maimaimpoana na amidy ho anao hahafinaritra amin'ity faran'ny herinandro ity
Manararaotra ny zava-misy fa efa amin'ny faran'ny herinandro izahay dia mitondra lalao telo tsara ho anao maimaimpoana na miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana hahafahanao manararaotra ny fitsaharanao
Colossatron: Fandrahonana manerantany dia lalao maimaim-poana ao amin'ny App Store amin'ity herinandro ity
Ny lalao App Store nosafidian'i Apple maimaimpoana dia Colossatron: Massive Global Threat, lalao feno fividianana fampiharana.
Final Fantasy XV dia ho tonga amin'ny iOS amin'ny fararano manaraka
Square Enix dia namoaka ny horonantsary voalohany momba izay ho ny kinova Final Fantasy XV ho an'ny finday
Ireo mpitady harena, dia sary an-tsary maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao Finders harena: fahitana volamena, dia sary an-tsary izay azontsika sintonina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra hikarohana harena sy fanadihadiana.
Bandai dia nanambara ny famoahana Tekken ho an'ny iOS
Afaka herinandro vitsivitsy dia hamoaka kinova Tekken ho an'ny iPhone ireo tovolahy ao amin'ny Bandai, lalao mpiady mahazatra izay namely ny tsena tamin'ny taona 1994.
Ny lalao tetika Tsuro, dia lalao maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny lalao nofidian'i Apple ho fampiharana ny herinandro dia antsoina hoe Tsuro, lalao tetikady mampiala voly izay hizaha toetra ny fahaizantsika
Asehoy izay fantatrao momba ny La Vuelta Ciclista a España
Husqvarna Spain dia mpanohana ofisialy ny La Vuelta ary mankalaza izany amin'ny lalao mampiala voly izay ahazoanao loka mahafinaritra.
Colorcube no fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny lalao nofidian'i Apple hanolotra maimaim-poana mandritra ny herinandro dia Colorcube, piozila mahafinaritra izay hanampy antsika hiala sasatra.
Titanfall: Tonga amin'ny iPhone sy sehatra hafa ihany ny fanafihana
Andao hojerentsika ny Titanfall: Fanafihana hahitanao ny dikan'ity tetikady iPhone vaovao ity.
Checkmate, lalao ho an'ny fampiharana Messages no fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Amin'ity herinandro ity ny lalao izay atolotry Apple ho antsika ao anatin'ny sokajy fampiharana maimaim-poana amin'ny herinandro ahitantsika ny Checkmate
Jereo ny lalao 25 ​​tsara indrindra ao amin'ny App Store, safidin'ny lohateny ho an'ny iPhone izay tsy azonao adino raha toa ka tena gamer ianao.
Ny tsy fahombiazan'ny Pokémon Go Fest any Chicago dia manafoana ny hetsika kasaina hatao any Eropa
Ny orinasa Niantic dia nanambara fa ny datin'ny volana aogositra voatondro amin'ny Pokémon GO Fest dia nahemotra raha tsy misy daty vaovao
Mitsitsia mihoatra ny 6 euro amin'ireo lalao roa ireo ho an'ny ankizy
Raha ny mahazatra, rehefa manoratra momba ny kilalao ho an'ny ankizy kely aho dia miresaka ireo mpamorona D. Panda, Sago ary ...
Ny fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro avy amin'ny App Store mba halefa maimaim-poana dia Domino Drop
Ny lalao nofidian'i Apple hanolotra azy maimaim-poana dia Domino Drop, lalao izay atambatra ny domino amin'ny Tetris
MOW - Minimal Over Wheels, lalao fialamboly miaraka amin'ny hatsarana Retro
MOW - Minimal On Wheels, kilalao gamer sy arcade gamer izay hanohitra anao hatrany, ary ny tena zava-dehibe dia mamela anao hanana fotoana mahafinaritra
Ireo mpizara niantic dia tsy tokony hikorontana amin'ny Pokémon Go Fest
Ny hevitra farany ni Niantic hamerenana ireo mpampiasa ireo dia ny Pokémon Go Fest, ary tsy fahombiazana tanteraka izany raha ny fiomanana.
Pokemon Go, taona iray amin'ny fanombohana lehibe indrindra teo amin'ny tantara
Pokemon Go dia rakipeo fampidinana tanteraka tamin'ny fanombohany izay tsy nisy nahavita nikapoka herintaona taty aoriana, na koa hahavita.
Manomboka mampiseho atiny fanonta ao amin'ny iOS 11 ny App Store
Aorian'ny herinandro tsy miovaova, ny iOS 11 App Store vaovao dia manomboka mampiseho atiny fanontana miaraka amin'ny resadresaka ifanaovan'ny mpamorona.
Ny lalao farany nataon'ny Profesora Layton dia tonga amin'ny iPhone sy iPad aloha kokoa noho ny consoles
Katrielle sy ny tsikombakomban'ny Millionaires no anaram-boninahitra vaovao ao amin'ny saga Profesora Layton izay tonga amin'ny fitaovana finday alohan'ny lalao lalao.
Amin'ity faran'ny herinandro ity dia hanana Pokémon Legendary izahay, ho azy ireo!
Niantic mihitsy no nanamafy tamin'ny fomba ofisialy fa amin'ny faran'ny herinandro 22 - 23 ho avy ny Legendary Pokémon ...
Pokémon GO dia navaozina ho an'ny iOS miaraka amin'ny fanatsarana maro
Ny lalao izay vao nivadika herintaona tao amin'ny App Store dia manohy manolotra fanatsarana taorian'ny fanavaozana lehibe izay ...
Dr. Panda's Fair, maimaim-poana izao ho an'ny iPhone sy iPad
Ny Dr. Panda Fair dia lalao fanabeazana feno natao ho an'ny ankizy kely ao an-trano izay azonao izao maimaimpoana
Atom Run, lalao sehatra maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao an-tsehatra izay asehontsika anao anio, Atom Run, dia hahafahantsika mankafy an'ity karazana lalao ity maimaimpoana, raha maharitra ny tolotra
Ny lalao platform illi, dia ny lalao App Store amin'ny herinandro
Ny lalao nofidian'i Apple ho lalao amin'ny herinandro dia illi, lalao sehatra hafa izay hahatonga antsika hanana fotoana mahafinaritra.
Virtua Tennis Challenge dia azo alaina amin'ny alàlan'ny SEGA Mandrakizay
Classics SEGA iray hafa, Virtua Tennis Challenge vao tonga tao amin'ny App Store ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch
Tonga amin'ny iOS Street Fighter IV Champion Edition izy io, ary amidy ihany koa
Tsy misy afa-tsy ny Street Fighter IV Champion Edition izay tonga ao amin'ny iPhone, lalao ady angano amin'ny fomba kilasika madio indrindra.
Toca Life: Tanàna, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao ho an'ny ankizy kely azontsika sintonina maimaim-poana dia ny fiainana Toca: tanàna, lalao ho an'ny ankizy hatramin'ny 5 taona
Mpamosavy! RPG tsara amin'ny fampiharana maimaim-poana amin'ny herinandro
Ity RPG amin'ny endrika lalao-boky ity dia safidin'ireo tovolahy Cupertino izay tsy tokony halainao, indrindra rehefa afaka tanteraka izany.
Tsingerintaona voalohan'ny Pokémon Go miaraka amin'ny fankalazana manokana
Herintaona izay no nipoahan'ny hadalana, olona marobe amin'ny toerana manokana, lasa ...
Ridge Racer Slipstream, fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny lalao App Store maimaim-poana amin'ny herinandro dia ny arcade classic Ridge Racer Slipstream
1979 Revolution, lalao fitsangatsanganana sinema, maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
1979 Revolution dia fisehoan-javatra mampientam-po izay misy ny vokany rehetra ary miankina amin'ny Revolisiona Islamika.
Ny lalao indie tsara indrindra ho an'ny iPhone
Atolotray anao ny lalao indie 9 tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad. Fantatrao daholo ve? Aza adino ny iray amin'ireo sangan'asa tokony hilalaovanao na inona na inona.
Azo alaina ao amin'ny App Store Futurama: World of Tomorrow
Ny lalao Futurama: Worlds of Tomorrow, miorina amin'ny andian-dahatsoratra mitovy anarana io dia azo alaina ao amin'ny App Store mba halefa maimaim-poana
Race Kings, lalao hazakazaka tsy mataho-tody izay mamadika ny App Store
Miresaka momba ny Race Kings izahay, lalao hazakazaka manaitaitra sy mifaninana izay mety ho ny akora rehetra nangatahinao.
Ny lalao fiara tsara indrindra
Inona avy ireo lalao fiara tsara indrindra ao amin'ny App Store? Jereo ity lisitra ity miaraka amin'ireo lalao hazakazaka 12 tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad.
Touch Hair Salon Me, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana atolotry ny Toca Boca antsika amin'ity herinandro ity dia antsoina hoe Toca Hair Salon Me, izay ahafahantsika manova mora foana ny endrik'ireo namantsika sy fianakaviantsika.
Ny fanavaozana Pokémon Go dia azo alaina ho an'ny iOS izao
Ny kinova Pokémon Go 1.37.1 dia azo alaina ho an'ny mpampiasa iOS miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany ...
SEGA Mandrakizay mitondra antsika SEGA kilasika amin'ny iOS maimaim-poana
SEGA Mandrakizay ho an'ny iOS sy Android dia eto, vondrona iray mivondrona izay mitambatra kilalao SEGA tsara indrindra amin'ny fampiharana iray.
Toca Lab: Plants no lalao Toca Boca vaovao ho an'ny ankizy kely
Ny lalao vaovaon'i AB dia antsoina hoe Toca Labs: Plants, lalao iray izay hanandraman'ny ankizy kely ny zavamaniry ao amin'ny laboratoara.
Beat Stomper no lalao maimaimpoana ao amin'ny App Store
Beat Stomper dia fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store, lalao mahafinaritra ary tsotra izay hampifaly anay.
Ny kilalao farany an'i Sphero dia Spiderman izay hofehezintsika amin'ny iPhone
Ireo tovolahy avy any Sphero, fantatra tamin'ny nandefasana ny robot an'ny BB-8 namana, dia nandefa Spiderman vaovao hifandraisana amin'ny alàlan'ny iPhone.
Angry Birds Evolution no RPG vaovao avy amin'ny orinasa Angry Birds
Ny bandy avy ao Rovio dia mandefa ny Angry Birds Evolution, lalao vaovao ahafahana mankafy ireo vorona kely malaza, amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny olon-dehibe ...
Microsoft dia nanambara fanavaozana lehibe ho an'ny Minecraft
Better Together no fanavaozana vaovao nomanin'ny Microsoft ho an'ny Minecraft, ny lalao kintana izay hananana patanty ny fampifanarahana azy.
Ny sary voalohany an'ny South Park: Destroyer an'ny telefaona ho an'ny iOS
South Park: Destroyer an-tariby, ny kinova kilalao amin'ny lalao video misy lohahevitra miorina amin'ny andiany izay ho tonga amin'ny 2017.
Manome anao FRAMED ny App Store, boky piozila tsara tarehy ho an'ny iPhone sy iPad
FRAMED dia boky mifototra amin'ny piozila izay, amin'ny alàlan'ny sary mahafinaritra, dia mila mamerina manamboatra ireo vignette hananganana ny tantara ianao
Toca Lab: singa, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny lalao farany omen'ny mpandrindra Toca Boca maimaimpoana ho an'ny ankizy dia ny Toca Lab: Elemen
Monument Valley 2 dia tonga amin'ny App Store tsara tarehy kokoa noho ny kinova voalohany
Ny lalao piozila malaza Monument Valley 2 dia tonga ao amin'ny App Store mba hahafahantsika manohy mamaha ireo mistery amin'ny alàlan'ny fomba fijery.
The Robot Factory, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao izay asehonay anao anio, The Robot Factory, dia mamela ny kely indrindra amin'ny trano hamorona robot mahafinaritra
Ny tetika Clash Royale tsara indrindra
Jereo ny tetika tsara indrindra an'ny Clash Royale hahomby amin'ny lalao ary ho lasa mpilalao malaza.
Lalao Dragons, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao farany avy amin'ny developer G5, Game of Dragons, dia azo alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Aorian'ny Pokémon Go, tonga ny Magikarp Jump, ilay lalao vaovao eo amin'ny tontolo Pokémon
Taorian'ny tazo izay noforonina niaraka tamin'i Pokémon Go, tonga ny Magikarp Jump, ilay lalao vaovao amin'ny franchise Pokémon izay hananganana Magikarp sariaka.
Pokémon Go dia manomboka manasazy ireo mpampiasa misoloky
Tsy misy fampitandremana, ireo tovolahy ao Niantic dia manomboka manasazy ireo mpampiasa manambaka amin'ny lalao Pokémon Go malaza.
Ny osilahy Goat Simulator dia mahazo namana vaovao amin'ny Goat Simulator Payday
Saika hatramin'ny nanombohany, Goat Simulator dia nanjary iray amin'ireo lalao hafahafa indrindra hita amin'ny App ...
Ny lalao Crazy Taxi dia miala amin'ny 4,99 euro mba ho maimaim-poana ao amin'ny App store
Ity dia iray amin'ireo lalao izay tsy azontsika hadino satria kilasin'i Sega ...
PES 2017 dia azo alaina ao amin'ny App Store
Azo alaina ao amin'ny App Store iray amin'ireo lalao baolina kitra tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra, PES 2017, miaraka amin'ny filalaovana lehibe
Futurama: Worlds of Tomorrow dia akaiky ny iOS
Futurama: Worlds of Tomorrw dia mamela antsika ny tranofiara voalohany ary famantarana mazava ny hoe iza no ao ambadiky ny fivoaran'ny lalao, tsy iza fa i Matt Groening.
Eggggg puking platform no lalao maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny lalao nofidian'i Apple hanolorana azy maimaim-poana dia ny Eggggg - sehatra Vomiting, amin'ny fandoavana dia hamela antsika handresy ny haavony
Tonga ny tsy fahamarinana 2 hamaly ny fangatahan'ny mpankafy azy, tsara toy ny taloha ihany
Miverina indray ny tsy fahamarinana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpankafy azy indrindra, ary hamela antsika hanana vava malalaka indray.
Legend of Zelda no lalao manaraka an'i Nintendo hanomboka amin'ny tsenan'ny smartphone
Afaka herintaona eo ho eo, Nintendo dia handefa ny Legend of Zelda, kinova vaovao namboarina tamin'ny fitaovana finday.
Kitten - Ny fampiharana biby fiompy tiako indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny fangatahana nofidian'i Apple hanolotra maimaim-poana mandritra ny herinandro dia ny Kitten: My Favorite Pet,
Ny Sims classic dia ho tonga amin'ny iOS amin'ny endrika milalao maimaim-poana atsy ho atsy
Elektronika Arts dia hanomboka ny lalao The Sims Mobile, lalao izay manome antsika ny fiasa mahazatra ny kinova desktop
Etermax Pictionary, ny lozam-pifamoivoizanao vaovao amin'ny lalao «mahazatra»
Etermax, ireo mpamorona blockbusters toa Naked, Mixed Up, ary Trivia Crack dia niverina niaraka tamin'i Pictionary.
Battle Bay no lalao vaovao hiverenan'i Rovio amin'ny ady
Te hahafantatra ve ianao hoe Battle Bay no daroka vaovao nataon'i Rovio? Atolotray anao ity lalao video an-tserasera haingam-pandeha ho an'ny iOS ity.
Chameleon Run, ampidino maimaim-poana amin'ny alàlan'ny app Apple Store
Ny orinasa Cupertino dia nanapa-kevitra ny hanome valisoa ireo izay mampiasa ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny kaody fampidinana, amin'ity tranga ity ho an'ny Chameleon Run,
Boky enchanted, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindranasa asehonay anao anio ho ampidininao maimaimpoana dia ny Enchanted Books, fisehoan-javatra an-tsary izay manana vidiny 2,99 euro mahazatra
0,49 euro dia mety ho vidiny ambany indrindra amin'ny fampiharana sy lalao ao amin'ny App Store
Ny fihetsiky ny Apple farany ao amin'ny iTunes Connect dia mampiseho amintsika ny mety ho 0,49 euro amin'ny vidiny ambany indrindra ankehitriny
Ny Magicien's Handbook, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny lalao Adventure The Magician's Handbook: Cursed Valley ho an'ny iPad dia tsy misy maimaim-poana amin'ny iPad irery ihany.
Ovay ho saripika amin'ny ToonCamera ny sarinao sy ny sarinao, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Misaotra an'i ToonCamera, azontsika atao ny mamadika avy hatrany ny sarintsika sy ny horonantsary ho sary mihetsika mahatsikaiky.
Apple dia mampiakatra ny vidin'ny fangatahana any Mexico, Espana ary any Eropa hafa
Apple dia nanomboka nandefa mailaka tamin'ny mpamorona nanambara ny fiakaran'ny vidim-piainana manaraka ho an'ireo fampiharana any Eropa sy Mexico.
Kilasy kanto miaraka amin'i Dr. Panda, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio mba halefa maimaim-poana, Art Class miaraka amin'i Dr. Panda, dia azo sintonina maimaim-poana.
Super Mario Run dia nohavaozina tamin'ny fampidirana tranobe vaovao
Ny fanavaozana farany ny Super Mario Run dia manampy fiasa vaovao manandanja izay hanatsara ny traikefan'ny mpilalao.
Làlana volamena 2, tantara mampihetsi-po mahafinaritra mandritra ny fotoana voafetra
Ny traikefa nahafinaritra an-tsary dia nanana ny fotoanany tamin'ny taona 90 sy tany am-piandohan'ny taona 2000, saingy nanomboka tamin'izay dia zara raha afaka ...
Lalao telo maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, ary tsy ampoizina, hankafizanao ny faran'ny herinandro
Androany dia manolotra anao tolo-kevitra lalao maimaimpoana telo izahay mandritra ny fotoana voafetra ho an'ny iPhone sy iPad, ary ny première film izay tianao.
Cute the Rope: Magic, no fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny lalao nofidian'i Apple ho fampiharana ny herinandro dia Cut the Rope: Magic, lalao iray izay hiatrehantsika piozila 160.
Ny kilalao piozila tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad
Vonona ny hampandeha ny ati-dohanao? Androany izahay dia manome safidy anao miaraka amin'ny lalao ankamantatra tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad
Bacon Escape, ny lalao napetraka amin'ny laharana voalohany amin'ny App Store
Bacon Escape, lalao hafahafa izay hanampianay kisoa kely mahafatifaty handositra ny fahababoana hafakely amin'ny fahakingan-tsaina.
Ny lalao mahatsiravina tsara indrindra ho an'ny iPhone
Androany aho manolotra fisafidianana fohy miaraka amin'ireo lalao mampihoron-koditra tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad, vonona ve ianao hiatrika ny zava-dratsy indrindra?
Alice voafandrika tao Wonderland, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio dia i Alice Trapped in Wonderland, lalao traikefa nahafinaritra sy piozila ho an'ireo ankizy kely.
Hyperburner, dia lalao maimaimpoana amin'ny App Store mandritra ny herinandro
Ny lalao maimaim-poana amin'ny herinandro nofidian'i Apple dia Hyberburner, lalao sambo misy sary azo ekena fa feon-kira mahafinaritra.
Toca Life: hopitaly, lalao vaovao ao amin'ny App Store ho an'ny ankizy kely
Ny lalao Toca Boca vaovao dia antsoina hoe Toca Life: Hopitaly, lalao izay tsy maintsy hitantanana hopitaly ny kely.
Ny lalao iPhone tsara indrindra teo amin'ny tantara
Androany ao amin'ny Actualidad iPhone dia manolotra fisafidianana lalao iPhone tsara indrindra amin'ny tantara rehetra izahay ary mamporisika anao hameno ny lisitra
Ny lalao Retro tsara indrindra ho an'ny iPhone
Androany aho mitondra safidy fohy miaraka amin'ireo lalao Retro tsara indrindra ho an'ny iPhone, ireo izay hitanao fa namboarina indray ary hitondra fahatsiarovana maro
Lalao ho an'ny ankizy hizara amin'ny zanakao amin'ity fialantsasatra ity
Androany dia manolotra fisafidianana fohy izahay miaraka amin'ny lalao kilalao ankizy tsara indrindra ho ankafizinao miaraka amin'ny zanakao amin'ity fialantsasatra ity
Lalao vaovao ahazoana tombony amin'ny fialantsasatra
Androany ao amin'ny Actualidad iPhone dia manolotra lalao vaovao efatra ho an'ny iPhone sy iPad izahay hanararaotana ireo andro fialantsasatra ireo
Minecraft Marketplace dia misy amin'ny lalao Minecraft: Pocket Edition
Azo antoka fa maro aminareo no nisintona ny Maincraft amin'ny findainao na amin'ny solosainao aza. Raha avy ...
Lalao 6 maimaim-poana hanombohana ny Paka amin'ny tongotra ankavanana
Mba hanombohana tsara ny fialan-tsasatry ny Paska dia manome anao safidy enina maimaimpoana izahay mandritra ny fotoana voafetra. Mihazakazaka ry zareo manidina!
Ny lalao ho an'ny ankizy kely ao an-trano izay asehonay anao anio dia ny Sago Mini Monsters, lalao izay manana vidiny mahazatra 2,99 euro.
Fiainana Toca: Sekoly, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny ankizilahy ao amin'ny Toca Boca dia manolotra antsika ny lalao Toca Life: Sekoly maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, lalao izay manana vidiny 2,99 euro.
Geekbench 4, Goat Simulator ary fampiharana maimaim-poana bebe kokoa mandritra ny fotoana voafetra
Androany dia manolotra lalao sy fampiharana, lalao ary rindrambaiko maimaimpoana telo izahay ahafahanay mitahiry hatramin'ny 8 euro
Roma: Ady tanteraka - Tonga tampoka tamin'ny iPad ity Fanafihana barbarà ity tamin'ny farany
Ny fahatongavan'i Roma: Ady tanteraka - Fanafihan'ny baribariana, dia mety ho alohan'ny sy aorin eo amin'ny lafiny filalaovana amin'ny iPad.
Mbola aleon'i Nintendo ny maodely voaloan'ny Super Mario Run mihoatra ny maodelin-freemium
Ireo tovolahy ao amin'ny Nintendo dia miresaka momba ny maodelim-barotra isan-karazany miaraka amin'ny lalao amin'ny finday.
Super Mario Run dia mahatratra ny kinova 2.0 miaraka amina endrika vaovao marobe
Nintendo dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny Android, nanampy litera vaovao sy ambaratonga vaovao azo alaina amin'ny kinova maimaim-poana
Fizarana ny App Store ho fomba iray hampiroboroboana lalao sasany
Apple dia nanapa-kevitra ny hanampy ireo mpamorona lalao indie miaraka amina sehatra maharitra izay hanampiana ny lohateny tsara indrindra.
1942, ny arcade classic, azo alaina ho an'ny iOS avy amin'ny Capcom izao
Ny klasika tamin'ny taona 80 sy 90, 1942, dia nidina fotsiny, tsy nilaza mihitsy, tao amin'ny App Store sy Google Play Store.
Lalao dimy mahazatra mba hiarahana amin'ny iPhone-nao
Androany dia hanolotra lalao dimy maimaimpoana sy mahazatra izahay handany ny fotoananao maty, ary raha tsy tianao ireo izay arosoko ... Ampirisiho ny anao!
Ny Escapists, lalao iray hisambotra anao na dia ny hitsoakao aza no iraka ampanaovina azy
Ka andao hahafantatra ny The Escapists, lalao iray izay manaporofo fa fahombiazana ao amin'ny iOS App Store ary holazainay aminao ny antony.
Ny lalao maimaim-poana amin'ity herinandro ity ao amin'ny App Store dia antsoina hoe Nightgate
Ny lalao nofidian'i Apple ho fampiharana ny herinandro dia Nightgate, lalao misy famolavolana minimalista ary feon-kira mahatalanjona.
Nisy tatitra momba ny statistika nahaliana navoaka tany Amerika Avaratra. Raha ny tatitra farany navoaka tao amin'ny cradle of consumerism manerantany, ...
Ny alina tsara dia tantara mifampitohy ho an'ireo ankizy kely ao an-trano mba hatory miaraka amin'ny biby.
Alto's Adventure dia amidy mandritra ny fotoana voafetra amin'ny fotoana fitsingerenan'ny andro faharoa ary asehon'izy ireo amintsika ny kinova vaovao izay ho tonga amin'ny fahavaratra
Little Green Riding Hood, lalao maimaim-poana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Ny tantara mifandraika Little Green Riding Hood no lalao nofidian'i Apple ho lalao mandritra ny herinandro ary azo sintomina maimaim-poana hatramin'ny alakamisy ho avy
Ny lalao farany natolotr'i Toca Boca azontsika alaina maimaimpoana dia ny Toca Kitchen, lalao iray izay hanarahan'ny ankizy kely ny hazo kesika ao an-dakozia.
Niantic dia nitatitra fanavaozana ho avy ho an'ny Pokémon GO, izay ankoatry ny fampidirana Pokémon vaovao, dia asiana fiasa vaovao.
Infinity Blade II, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona ny lalao Infinity Blade II, ary mitahiry ny 6,99 euro izay ananany toy ny vidiny mahazatra.
Andiana LEGO 4, azo alaina 0,99 € monja
Mandritra ny fotoana voafetra, ny bandy ao amin'ny Warner Bros dia manome kitapo Lego efatra ho anay latsaky ny iray euro. 4,99 euro ny vidiny mahazatra.
Efa akaiky ny Andron'ny mpifankatia ary nanapa-kevitra ny hanao hetsika manokana i Niantic mba hankalazana izany ao amin'ny Pokémon GO.
Ny lalao Roofbot Puzzler On The Roof dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro ao amin'ny App Store, saingy mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Skate City, nanambara ny lalao Skateboard vaovao ireo mpamorona ny Adventure Alto
Tianao ve ny Adventure Alto? Tianao Skateboard? Vaovao tsara: Snowman dia nanambara fa hamoaka ny Skate City izy ireo, lalao iray izay mampanantena fa hahaliana.
Super Mario Run dia nohavaozina nanampy fomba maivana vaovao ary koa hetsika vaovao.
Vaovao ratsy ho an'ny mpankafy Nintendo: Nanambara ny goavambe lalao video Japoney fa hihemotra ny Animal Crossing.
Tianao ve ny lalao toa an'i Zelda? Ho faly ianao hahafantatra fa kely kokoa ny fotoana hianjadian'ny Oceanhorn 2 amin'ny App Store. Ireto ny sary voalohany.
Ninja Spinki Challenge, lalao tsy azo atao vaovao avy amin'ny mpamorona Flappy Birds
Tsy nahomby anao ve ny lalao iray amin'ireo karazana Flappy Bird tsy afaka atao? Vaovao tsara: namoaka ny Fanambarana Ninja Spinki ny mpamorona azy ary sarotra be izany raha ny feo.
Niverina niasa i Nintendo tamin'ny alàlan'ny fandefasana Pokémon Duel ho an'ny iOS, lalao tetika vaovao miaraka amin'ny Pokémon ho protagonista.
Ny lalao vaovao atolotry ny developer G5 antsika dia Deep Town: The Twin Candles, lalao iray izay hahatongavantsika ho vampira.
Tianao ve ireo lalao kely? Ahoana raha ampiantsika ao anaty cocktail ihany koa ny paikady? Manana izany rehetra izany ianao ary maro hafa ao amin'ny Intuiton.
Iray volana sy dimy andro aorian'ny famoahana ny Super Mario Run natokana ho an'ny iOS, ny lalao dia tsy ao anatin'ny fampiharana 50 avo lenta indrindra amin'ny App Store
Toa hanatanteraka ny fampanantenany i Nintendo: efa nanambara izy fa hamely ny App Store amin'ny 2 febroary ny Fire Emblem Heroes.
Ny fampiharana ny herinandro nofidian'i Apple dia ny Busy Shapes, lalao ho an'ny ankizy 2 ka hatramin'ny 5 taona.
Mitandrema amin'ny Pokémon GO! Lalao mampidi-doza tokoa izany! ... na zavatra toa izany no lazain'izy ireo any Shina. Misy antony manosika ve ao amin'io fanambarana io?